Madaxwynaha Puntland oo kormeer ku marey xarumaha wasaraha Garowe
Madaxwynaha Puntland oo kormeer ku marey xarumaha wasaaradaha Garowe
GAROWE, Puntland- Madaxweynaha Puntland oo dib ugu soo noqdey magalaada Garowe 15 Sept, 2016 ayaa maanta kormeer ku soo marey xarumaha wasaardaha Dowlada ee magaalo madaxda Garowe halkaasoo kula kulmey mas'uuliyiinta xafiisyadaas.
Kormeerka Madaxweyne Gaas ayaa sida lagu qorey Boggs FB ee ku hadla afka xafiiska madaxtooyada Puntland ayaa lagu sheegey inuu salka ku hayey u kuur galka habsami u socodka shaqooyinka ka socda xarumahaasi iyo qaabka ay bulshada ugu adeegayaan masuuliyiinta kala duwan ee ka hawl gala xarumahaasi, kuwaas oo loo igmaday in ay si daacad ah ugu adeegaan dadka iyo dalka.
Wasaaradihii uu saaka Madaxweynuhu kormeerkiisa ku kala bixiyey ayaa waxaa ka mid ahaa Wasaaradda Qorshaynta iyo xiriirka Caalamiga ah, Wasaaradda Beeraha iyo waraabka, Wasaaradda Haweenka iyo Arrimaha Qoyska, Wasaaradda Ganacsiga iyo Warshadaha, Wasaaradda Shaqada iyo Shaqaalaha, dhallinyarada iyo ciyaaraha, Wasaaradda Aminga iyo DDR, Wasaaradda Maaliyadda, Hanti dhawrka guud, Hay'adda Qandaraasyada Puntland iyo xarunta guriga Gobolka Nugaal oo uu ka socdey.
Booqashada madaxwynaha Puntland ee wasaradahaan ayaa ku soo beegmeysa xilli habacsanan ba'an ka jirto shaqada wasaardaha Dowlada iyadoo sababtu tahay mushahar la'aan iyo madaxda Dowlada oo aan muddo kor u dhaafeysa sanad aan fariisan xafiisyadooda.
Gaas oo diidey in saxaafadu su’aalo waydiiso xilli uu dib ugu noqdey Garoowe [ Daawo]
Puntland 13.10.2018. 16:33
Gaas ayaa mudadii uu xilka mamaulkaan hayey waxaa lasoo gudboonaadey dhibaatooyin...
Qardho oo hogaamisay Tartanka Qur’aanka Kariimka degmooyinka Puntland [Daawo]
Puntland 18.06.2017. 17:26
​Madaxweyne Gaas oo xariga ka jaray Masaajid laga dhisay Madaxtooyada Garowe
Puntland 31.03.2017. 21:34
WARBIXIN: Madaxweyne Gaas oo Puntland dibada uga maqnaa 166 cisho sanadkii 2016
Puntland 01.01.2017. 22:06
​Madaxweynaha Puntland oo la kulmay madax ka socotay MSF
Puntland 29.05.2016. 22:22
​Madaxweyne Gaas oo u safray Muqdishu [Dhagayso]
Puntland 28.05.2016. 15:06
​Madaxweyne Gaas oo ka hadlay safarkiisa Muqdishu
Puntland 13.04.2016. 21:28
Madaxweynaha Puntland oo kormeerey xarumo
Puntland 30.01.2016. 14:31